Iyo Apple Watch inogona kupedzisira yave chimwe chezvinhu zvakakosha zvekurapa zvakagadzirwa | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inogona kupedzisira yave chimwe chezvinhu zvakakosha zvekurapa zvakagadzirwa
Kungave kushinga kwandiri kuti ndiise zita iri mune ino posvo. Nekudaro, ini handifunge kuti ndiri kure nemanzwiro aripo pakati pevekurapa uye vashandisi nezve ichi chishandiso. Iyo Apple Watch yakazvarwa semubatsiri anobatsira mudziyo. Asi ikozvino azvimiririra zvachose, ane hupenyu hwake ega nemamiriro ake ezvinhu uye zvakanyanya kana zvichibvira sezvo tiine iyo GPS + Cellular modhi. Chidzidzo chitsva chinotitaurira kuti tifunge nezve mikana yenguva uye kuti ingashandurwe sei kuva mushonga unokosha.
Iyo Apple Watch yakazvarwa makore matanhatu apfuura yakashanduka nenzira inotyisa. Isu tabva pane chishandiso chakatsamira chose pa iPhone kuti ive imwe yemidziyo ine fungidziro yakanyanya yeiyo ecosystem yekambani. Yakazvarwa iine zano rekubatsira mushandisi kuti asashandise uye nekuziva zvakadaro nharembozha kuti ndiyo imwe yemidziyo yakakosha yekurapa nhasi. Mune ramangwana risiri kure kuti uve padhuze zvakakosha kune vamwe vanhu.
Isu tabva pakubatsira vanhu kana paitika kudonha kuti tikwanise kuona matambudziko emwoyo, kuchengetedza hupenyu hwakawanda. Mune ongororo ichangoburwa pakatombotaurwa nezve mukana we kukwanisa kudzivirira uye kuona nekukurumidza zviratidzo zve COVID-19. Iyo coronavirus yakaisa hunhu mukutarisa uye kunyangwe iri hutachiona husina huwandu hwekufa, iri kuvhiringidza vanhu.
Chidzidzo chitsva chinoti iyo Apple Watch inogona kufanotaura zviratidzo zveCOVID pasvondo pamberi pePCR
Kuti mudziyo unokwanisa kufanotaura zviratidzo zvingangoita zvechirwere zvisati zvaitika ndiko kufambira mberi kukuru. Asi kuigadzira wachi "inodhura" uye mukati memunhu wese kusvika inhanho huru kuenda kumberi. Iwe unogona kuchinja mamiriro emhando idzi dzemagadget. Iyo Apple Watch inogona kuve yekutanga kune mazhinji kuuya gare gare uye kuti kushandiswa kukuru kwerudzi urwu rwechigadzirwa chinhu chakanaka kwazvo.
Un kudzidza kutsva nevatsvagiri vanobva kuGomo reSinai kuUS vawana kuti Apple Watch inogona kufanotaura zvine mutsindo COVID-19 kuongororwa kusvika vhiki imwe pamberi pezvino PCR-yakavakirwa nasal swab bvunzo. Uku kutsvagurudza kwakaburitswa muRondedzero yeMedhi Internet Tsvagiridzo uye yakaongororwa vezera. "Warrior Watch Study" yaisanganisira mazana emazana evashandi vehutano veGomo reSinai. Ivo vakashandisa iyo Apple Watch uye iPhone ine chishandiso icho chakange chakatsaurirwa kuongorora uye kuunganidza yako yega data rehutano.
Pfungwa huru yekufarira kune vaongorori yaive iyo kusiyanisa kwemoyo wemoyo (HRV), chiratidzo chakakosha chekushushikana muhurongwa hwemitsipa. Iyi seti yedata yakasanganiswa nezviratidzo zvakataurwa zvine chekuita nechirwere ichi, senge fivha, maronda, chikosoro chakaoma, uye kurasikirwa kwekuravira uye hwema. El Warrior Tarisa studio Kwete chete kwaikwanisa kufanotaura hutachiona kusvika vhiki pasati kuongororwa kwakapa kuongororwa kwakasimbiswa, zvakaratidzawo kuti vatori vechikamu 'maHRV maitiro akajairwa nekukurumidza nekukurumidza mushure mekuongororwa kwavo, vachidzokera kune zvakajairwa rinenge vhiki kana maviri mushure mekuedzwa kwako kwakanaka.
Vatsvaguriri vanotarisira kuti mhedzisiro inogona kubatsira kutarisira mhedzisiro uye kure kure nekuparadzanisa vanhu vari panjodzi. Izvo pasina kuita bvunzo yemuviri kana kuitisa bvunzo yeswabi. Kudzivirira iyo inogona kupararira pamberi peumwe munhu kunotapukira zvikuru. Chidzidzo ichi chichawedzerwa mune ramangwana kuti uone kuti ndeapi mamwe machira anopfeka anogona kushanda pazviyero zvakafanana nemamiriro ezvinhu eCOVID-19 kana zvimwe zvirwere.
Parizvino, Apple iri kushanda nevanoongorora kubva Seattle Flu Kudzidza uye hunyanzvi hweYunivhesiti yeWashington Chikoro cheMishonga. Chinangwa ndechekuongorora kuti shanduko muropa okisijeni uye nekurova kwemoyo zvinogona sei kuve zviratidzo zvekutanga zvefuruwenza uye COVID 19. Yapfuura yakazvimirira Apple Watch zvidzidzo zvakaratidza kuti smartwatch moyo maseru tsvaga zviratidzo zvekutanga zvechirwere cheshuga uye upe zviratidzo zvekutanga zvekuyedzwa kweatrial fibrillation.
Ndikati: Iyo Apple Watch inogona kupedzisira yave imwe yeiyo zvigadzirwa zvakakosha zvekurapa zvakamboitwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Apple Watch inogona kupedzisira yave chimwe chezvinhu zvakakosha zvekurapa zvakagadzirwa
Apple inodhinda vhidhiyo nyowani inosimudzira mwaka wechipiri we "Kune Vese Vanhu"